जँड्याहा साथीलाई सिकाए यस्तो पाठ, अब जीवनभर छुने छैनन् मदिरा, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
जँड्याहा साथीलाई सिकाए यस्तो पाठ, अब जीवनभर छुने छैनन् मदिरा
एजेन्सी। मदिराको लत कैयौं पटक प्राणघातक पनि हुन सक्छ । आफ्नो एक साथीको यस्तै रक्सीको लतका कारण हैररान भएका साथीहरुले उनलाई यस्तो पाठ सिकाए कि त्यसपछि ती व्यक्तिले महिल्यै मदिरालाई हात पनि लगाएनन् । अमेरिकाका टम नामका ती व्यक्तिलाई अत्याधिक मदिरा पिउने लत थियो । उनी पिएर गाडी चलाउँथे जुन उनका साथी रे लाई ठिक लाग्दैनथ्यो । कैयौं पटक टम नशामा गाडी चलाउँदा दुर्घटनामा परिसकेका थिए । यति हुँदा पनि उनले आफ्नो र अरुको ज्यान जोखिममा पार्न छोडेनन् ।
टमको बानीले हैरान भएका साथी रे ले अन्य साथीहरुसँग मिलेर योजना बनाए । सबै साथीहरुले एउटा पार्टी आयोजना गरे । पार्टीमा टमलाई पनि बोलाइयो । टमले सधैंझैं अत्याधिक मदिरा पिउँछन् । त्यसपछि उनी बेपत्ता हुन्छन् । रे हेर्न जान्छन् कि टम कहाँ गए । टम आफ्नो कारमा भेटिए । अत्याधिक पिएका कारण उनी बेहोसीको हालतमा सुतेका थिए । टम सुतेपछि साथीहरुले अर्को खेल सुरु गर्छन् ।
साथीहरुले टमलाई उठाएर एक साथीको खाली कोठामा लिएर जान्छन् । यहाँ योजनाअनुसार सबै साथीहरुले एउटा नक्कली अस्पतालको सेटिङ गर्छन् । बेडदेखि केही नक्कली मेसिन यहाँ जडान गरिन्छ । अस्पतालबाट भाडामा लिइएको बेडमा टमलाई सुताउँछन् । एक युवतीलाई नर्सको अभिनय गर्नको लागि त्यहाँ राखिन्छ । भोलिपल्ट टम बिउँझिँदा आफूलाई अस्पतालमा भेटेपछि अचम्म पर्छन् । उनको छेउमा एउटी नर्स उभिएकी थियन् जसले उनको हालचाल सोध्छिन् ।
त्यसपछि रे डाक्टरको भेषमा आउँछन् । रेले टमलाई यस्तो खबर सुनाउँछन् कि टमहो होसहवास उड्छ । रेले भन्छन् ‘टम तिमी १० वर्ष पछि कोमाबाट होसमा आएका हौ । तिम्रो रक्सीको नशामा भयानक दुर्घटना भएको थियो त्यसपछि तिमी कोमामा गएका थियौ ।’ यो सुनेर टमको बोली बन्द हुन्छ । उनलाई लाग्छ कि यो सबै सत्य हो । एकैछिनपछि रेले मुखबाट डाक्टरको मास्क हटाएर टमलाई कुट्न थाल्छन् अनि भन्छन् यो सबै सत्य पनि हुन सक्छ यदि उनले नशामा गाडी चलाउन छोडेनन् भने । त्यसपछि टमलाई गल्ती महसुस भयो । उनले कसम खाए कि अब कहिल्यै रक्सी छुने पनि छैनन् ।